Camargo Inn - I-Airbnb
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguKevin And Wyonna
UKevin And Wyonna yi-Superhost
Wamkelekile kwifama yethu yemveli esekwe eLancaster County engqongwe ziifama ezisebenzayo. I-Inn ilungile kwiintsapho okanye amaqela amancinci. Kubandakanya amagumbi okulala amahlanu, okulala iindwendwe ezilishumi! Hlala kwiveranda engaphambili ejongene nefama yobisi eneenduli eziqengqelekayo kunye nezilwanyana ezitya imfuyo, okanye ukonwabele imbonakalo engasemva engasemva enegadi, izilwanyana zasendle ezincinci kunye nexhama ngamaxesha athile. Lindela ukubona iibhugi ze-Amish zihlala zidlula kwipropathi.
Sithenge indlu yasefama ngehlobo lika-2017. Ngolungiselelo oluninzi kunye nomsebenzi owenziweyo kwindawo ngoku isanda, icocekile, kwaye yamkelekile!
Ikhitshi yethu yomgangatho wokuqala igcwele izinto ezibalulekileyo:
Umenzi wekofu kunye nekofu egayiweyo, iswekile, kunye nezimuncumuncu
SP, ioli, kunye nobusi
I-Microwave, i-toaster, kunye ne-crockpot
Itafile enkulu ye-8-10
Iimbiza, iipani, idinnerware, kunye nesilivere.
Igumbi lokuhlala libanzi kunye nefenitshala ekhululekile yokuphumla, i-TV ehlakaniphile, i-akhawunti ye-Camargo Inn Netflix, i-DVD player, indawo yokucima umlilo, itafile ejikelezileyo yemidlalo okanye imisebenzi yezandla, njl., kunye neefestile ezinkulu ezenza kube lula ukujonga iigadi. kunye nezilwanyana zasendle. Kukho ipatio yangaphandle efihlakeleyo enefenitshala ethe tye ngakwigumbi lokuhlala. Sineencwadi, iiDVD, iipuzzle kunye nemidlalo yamakhadi, kunye nezinto zokudlala kunye neencwadi zabantwana.
ICamargo Inn inamagumbi okulala amahlanu. Igumbi lokulala lokuqala likumgangatho wokuqala kwaye linebhedi enkulu. Amanye amagumbi okulala akumgangatho wesibini kwaye abandakanya iibhedi ezimbini zokumkanikazi, ibhedi enabantu ababini, kunye neebhedi ezimbini zabantu abangabodwa. Kukho iibhedi ezimbalwa kwigumbi lokuhlala ezilungele ukulala. Sibonelela ngeshampu, isepha yesandla, iitawuli kunye namalaphu okuhlamba, ilinen kunye nemiqamelo, kunye neengubo ezongezelelweyo.
Kukho amagumbi okuhlambela amabini agcweleyo. Igumbi lokuhlambela elikumgangatho wokuqala lineshawari ebanzi kunye nebhafu yejacuzzi. Igumbi lokuhlambela elikumgangatho wesibini lineshawari/ibhafu eqhelekileyo.
I-foyer kumgangatho ophambili inika indawo eyongezelelekileyo yezinto zakho zeholide, indawo yokubeka idyasi, kunye newasha kunye nesomisi.
I-Inn inendawo eyihektare engasemva enendawo yomlilo kunye nezinto onokuthi uzisebenzise kwaye uzonwabele.
***Sicela ukuba inani leendwendwe ezihlala ubusuku bonke libonise inani elibekelwe indawo. Sizama ukuseta ixabiso lethu elinomtsalane kumaqela e-2 kodwa lifanelekile kumaqela e-10. Ukuba unemibuzo malunga nale nto nceda unganqikazi ukubuza.
4.87 out of 5 stars from 299 reviews
4.87 · Izimvo eziyi-299
Bonisa iingxelo zokuhlola eziyi299
Sifumaneka kwimizuzu engamashumi amabini kuphela ukusuka kwiHistoric Strasburg, Sight & Sound Theatre, Kitchen Kettle Village, Cherry Crest Farm, kunye neTanger Outlets. Kundwendwe olunomdla kukho indawo yokufikelela kumzila kaloliwe wengingqi kwiimayile ezimbalwa phantsi kwendlela. Iklabhu yeGalufa yaseTanglewood Manor kukuhamba nje imizuzu eli-10 kunye nezinye iiklabhu ezintathu ezingaphantsi kwemizuzu engama-20. Jonga incwadi yesikhokelo yeendwendwe ukuze ufumane iingcebiso malunga neendawo zokutyela ezikufutshane kunye nezinto ezinomtsalane!
Umbuki zindwendwe ngu- Kevin And Wyonna
Ngelixa uhleli nathi ikhaya lelakho kodwa umamkeli ukufuphi ukuba uyafuneka.